လက်ဖဝါးပေါ်က ‘X’ အက္ခရာ ပါရှိသူများရဲ့ ထူးခြားချက်များပေါင်းချုပ်…. – Shwe Yaung Lan
HomeKnowledgeလက်ဖဝါးပေါ်က ‘X’ အက္ခရာ ပါရှိသူများရဲ့ ထူးခြားချက်များပေါင်းချုပ်….
လက်ဖဝါးပေါ်က ‘X’ အက္ခရာ ပါရှိသူများရဲ့ ထူးခြားချက်များပေါင်းချုပ်….
January 20, 2021 Writer Magic Knowledge 0
လက်ဖဝါးပေါ်က ‘X’ အက္ခရာ ပါရှိသူများရဲ့ ထူးခြားချက်များပေါင်းချုပ်
အစီအစဉ်မချဘဲအောင်မြင်သူများဖြစ်တယ်။သူများတွေက အောင်မြင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေချပြီး လုပ်ရတတ်ပေမယ့် ဒီအမှတ်အသားပါသူတွေကတော့ အစီအစဉ်ချစရာမလိုဘဲ အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။သူတို့သည် အကြီးမြတ်ဆုံးသောအရာတွေကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။
ထိုးထွင်းသိစိတ်ရှိကြတယ် X ပုံစံ လက္ခဏာရှာရှင်များသည် ဝမ်းတွင်းစိတ်၊ အလိုလိုသိစိတ် ပါလာတတ်ကြသည်။သူတို့ကို လိမ်လို့မရပါ။ သစ္စာတရားကို တန်ဖိုးထားပြီး အရာရာကို အသေးစိတ် သတိထားမိတတ်ကြသည်။ ထိုးထွင်းစိတ်လည်း အရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ဆဌမ အာရုံရရှိထားသော သူများဟုဆိုနိုင်သည်။
လူတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီအမှတ်အသားပါတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ရော၊ကိုယ်ပါ ပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ လူအများချစ်ခင်နှစ်သက် အားကိုခြင်းခံရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအားကိုးခြင်းခံရတဲ့အတွက် သူများကိစ္စများ လိုက်လံဆောင်ရွက်ရလေ့ရှိပြီး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ပင်ပန်းရနိုင်သည်။မကောင်းသော သမာအာဇီဝမကျသော အလုပ်တွေနှင့်လည်း အကျိုးမပေးတတ်ပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အကုသိုလ် အလုပ်တွေနှင့် ဘာတစ်ခုမှ အကျိုးမပေးတတ်ပါ။
အခက်အခဲ ဒုက္ခတွေမှ ကျော်လွှားလွန်မြောက်နိုင်မယ်ဒီကြက်ခြေခတ်ပါလာသူတွေအတွက် မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ မတော်တဆမှုတွေနှင့် ကြံရနိုင်ပါတယ်။ရေနစ်ခြင်း၊မီးလောင်ခြင်း၊ ဓါတ်လိုက်ခြင်း၊ဆိုင်ကယ်၊ ကားအက်ဆီးဒန့် ဖြစ်တာမျိုးတွေ တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူများလက်ချက်နဲ့ မသေနိုင်သလို အက်ဆီးဒန့်တွေကြောင့်လည်း သေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲဘယ်လောက်ရှိရှိ နောက်ဆုံးမှာ ကူညီသူတွေအမြဲရှိတတ်ပါသည်။
သူတော်ကောင်းလက်ရှေးဟောင်း ကျမ်းဂန်များအဆိုအရ ဒီလက်ဟာ သူတော်ကောင်းလက်လို့ဆိုပါတယ်။လောကဓံတွေကြုံတွေ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ တရားထူး၊တရားမြတ်ကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားတတ်ကြပါသည်။ တကယ်သာ တရားကျင့်ကြံနိုင်ပါက သောတပန်အနည်းဆုံး တည်နိုင်ပါသည်။ ဘဝရဲ့ အေးငြိမ်းမူကို တတိယအရွယ်လောက်မှသာ ခံစားနိုင်ပါမည်။ သူတပါး သွားပုတ်လေလွင့်ပြောဆိုတာ ၊မကျေနပ် ရန်ငြိုးဖွဲ့တာ များရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ပေမယ့် ဒီလက္ခဏာရှိသူတွေဟာ ကြီးမြတ်တဲ့နေရာကို ရောက်ရှိဖို့ အတွက် တွန်းအားများအဖြစ် ကျော်လွှားနိုင်ကြပါလိမ့်မည်။
လက်ဖဝါးမှာ Xပုံစံ သင်္ကေတလေးပါနေရင် သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို သိထားဖို့လိုပြီ။ မင်းဟာ လက္ခဏာဗေဒင်ကို ဝါသနာပါသူလား။ ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကို သိရမယ်ဆိုရင် လူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။
တစ်ချို့ဟောချက်တွေက မှန်တာတွေလည်းရှိသလို ၊ အချို့ဖြစ်မလာတဲ့ ကိစ္စလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ယုံကြည်သူဖြစ်စေ ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ ဒီလို လက်ဖဝါးမှာပါတဲ့ X ပုံစံလေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုတော့ သိချင်သူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
X ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောပြချင်တာကတော့ မင်းဟာ ပြိုက်ဘက်ကင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်မယ့် လက္ခဏာပါ။ ရုရှား STI တက္ကသိုလ်မှပညာရှင်များ လေ့လာချက်အရ လူတွေရဲ့လက္ခဏာဖွဲ့စည်းပုံဟာ ရှုပ်ထွေးပေမယ့် များသောအားဖြင့် ဒီလို X ပုံစံပါတဲ့ လူတွေဟာ ပြိုင်စံရှားဖြစ်သလို အထင်ကရလူတွေအဖြစ်လည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာ စိတ်ဓာတ်မာကြောပြီး တိတ်တဆိတ် နေတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလူတွေမှာ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အင်အားတွေအများကြီးပါဝင်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ သူတို့ဟာသေသွားရင်တောင် နာမည်တွင်ကျန်ခဲ့မယ့် လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲအမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတတ်ပြီး တစ်ဖက်သားက လွယ်လွယ်နဲ့လာလိမ်တာမျိုးဆိုလည်း သိနှင့်နေတတ်ပါတယ်။
ပြောပါဦး စာဖတ်သူများဆီမှာရော ဒီလို X ပုံစံပါနေရဲ့လား ။ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ မင်းဟာ ကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ.. ဆိုတော့ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော်
“ မြန်မာပြည်ရောက်လာတော့မည့် Oxford ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့အချက်များ ”